कर सम्बन्धि कार्यक्रम (करका कुरा) भाग ६ | www.itaharifm.com.np
गृहपृष्ठ » Program Archive » कर सम्बन्धि कार्यक्रम (करका कुरा) भाग ६
कर सम्बन्धि कार्यक्रम (करका कुरा) भाग ६
Posted by Itahari Fm | error | ५६८ पटक
कार्यक्रम करका कुरा……..
कार्यक्रम करका कुरा आन्तरिक राजश्व कार्यालय धरानको सहयोगमा इटहरी एफ.एमले तयार पारेको कर सम्बन्धि जानकारी मुलक कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रममा हामी करको डर होइन करको भर गर्न उत्प्रेरित गछौँ । तर्पाहरुलाई कर सम्बन्धि जानकारी दिन यस कार्यक्रम मार्फत कर के का लागि र किन तिर्ने ? हामीले तिरेको कर कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिने छौँ । यस्तै करसँग सम्बन्धि चेतनामुलक नाटक जस्तो मती उस्तै गति पनि सुनाउँछौँ ।योसँगै करसँग सम्बन्धि सन्देश र जानकारी त दिने नै छाँै ।
आजको अंकमा हामी शिक्षा सेवा शुल्कको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ ।शिक्षा सेवा शुल्क एक प्रकारको कर हो । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका शिक्षण संस्थाहरुले बुझाउने कर हो । शिक्षा सेवा शुल्क निर्देशिका २०६६ र प्रत्येक बर्ष जारी हुने आर्थिक ऐनमा यस सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
यो कर बापत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा प्रत्येक शिक्षण संस्थाले शिक्षा सेवा शुल्क वापत लिईने भर्ना शुल्क र मासिक शुल्कको १ प्रतिशत कर सरकारलाई बुझाउनु पर्छ । सरकारले यो कर संकलन गरेर पिछडिएको तथा विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरुको हितमा खर्च गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था लागु गरिएको हो ।
तपाई स्कुल कलेज सञ्चालकहरु कस कसले यो कर समयमै बुझाउनु भएको छ ? यदि छैन भने तोकिएकै समयमा गएर आफुले तिर्ने कर तिर्नुहोला । ढिलो भए थप जरीवाना र शुल्कको भार बोक्नु भन्दा समयै कर तिर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसले शिक्षण संस्थाको सामाजिक छवि पनि उच्च बनाउँछ ।
आज पनि हामी शिक्षा सेवा शुल्क कर र यसँैसँग सम्बन्धित नाटक जस्तोमति उस्तै गति सुनाउनेछौँ । अनि यो करका विषयमा थप स्पष्ट पार्न आन्तरिक राजश्व कार्यालयका कर अधिकृत ओमप्रकाश भट्टराईसँग गरिएको कुराकानी पनि गरेका छाँै । तपाईले यो कार्यक्रम इटहरी एफ.एम. ९२.५ मेगाहर्जमा प्रत्येक बुधबार राती ८ः ३० बजे सुन्न सक्नुहुन्छ । तपाईले यो कार्यक्रम www.itaharifm.com.np
मा लगअन गरी सुन्न पनि सक्नुहुन्छ ।
इटहरीमा अन्तराष्ट्रिय धार्मीक महोत्सव सुरु